Azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny tetik'ady SEO ho an'ny backlinks tsara indrindra amin'ny taona 2016?
Inona ny fomba fiasa tsara indrindra amin'ny backlinks amin'ny 2016, indrindra indrindra amin'ny fomba fijerin'ny SEO? Mino aho fa amin'izao fotoana izao, ny fomba tsara indrindra amin'ny fananganana rohy mahomby dia mihetsika amim-pahazotoana hitazona ny zavatra tsara sy feno tanteraka. SEO maro sy manam-pahaizana momba ny Internet no mihevitra fa ny fanaraha-maso tsy tapaka amin'ny fanilihana ny paikady rehetra sy ny fifandraisana amin'ny rindrina dia ny fanamafisana ny SEO amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny backlinks amin'ny 2016. Midika izany fa tsy misy tetika iraisampirenena ao amin'ny Search Engine Optimization miaraka amin'ny 100% azo antoka sy ny valiny mety ho azo tanterahina araka ny anton-javatra tokony hoeritreretina ho an'ny toerana misy ny laharam-pivoaranao - asphalt repair jessup.
Mitandrema misimisy iraisana
Eny, ny hany zavatra azontsika atao - tokony ekeko - dia tokony hazava tsara amin'ny fampiasana fomba tsy azo antoka sy tsy azo antoka tanteraka ny fanorenana rohy. Midika izany fa tokony hieritreritra im-droa ianao alohan'ny fampiharana na dia amin'ireo tranga malaza rehetra hita ao amin'ny SEO aza, na inona na inona fampanantenana mety ho hitan'izy ireo amin'ny mijery voalohany. Noho izany, mety ho hadinonao tsara ny "fanavaozana" toy izany, mazava loatra, raha tsy miasa ianao ary efa nahazo fahazoan-dàlana mazava - ary inona no hataonao ary inona no tanjona manokana. Na izany aza, mino aho fa saika misy olona afaka mankafy ny vokatra azo antoka amin'ny fananganana profil-mahery amin'ny tranokala na bilaogy. Midika izany fa misy sekoly tranainy maromaro ary mampiasa fomba azo antoka ho an'ny backlinks tsara indrindra amin'ny taona 2016, na dia tsy mampiasa tambajotra SEO marina na mpilatsaka an-tsarimihetsika maimaim-poana any amin'ny indostria mandritra ny taona maro. Eto ambany eto aho dia handinika fijery fohy momba ny fomba amam-panao lehibe indrindra sy ny fahitana mazava izay hanombohana ny fananganana rohy mahazatra mba hanatsarana ny SEO amin'ny sehatra.
Famaritana ny lisitry ny rohy momba ny rohy
Aoka isika handray izany ho azo antoka - Azo zaraina ho "teboka roa" ny rohy rehetra ao anatiny.Raha tsorina dia matetika ny zava-drehetra dia miankina amin'ny loharanony sy ny fotoana mety indrindra hanombohana azy hanangana azy ireo nefa tsy hiandry ahiahiana amin'ny fomba fijerin'ny vondrona lehibe toy ny Google mihitsy. Manome toky amin'ny fanoherana matetika sy ny sazy izay mety hidina tampoka ny toerana misy anao - efa ho avy tsy ho ela. Mba ho eo amin'ny lafiny azo antoka, tokony hanaraka ny dingana mety amin'ny hetsika hatrany am-piandohana ianao. Amin'izany fomba izany, manoro hevitra ny fanasokajiana ireo rohim-pirahalahiana mifandraika aminao aho:
Ireo lahatsoratra manan-danja indrindra ao amin'ny Wiki.
Fandraisana an-tariby ao an-toerana.
Lisitry ny orinasa mifandray amin'ny orinasa.
Torolalana momba ny lahatsoratra voatanisa mba hampifandraisana indray ny tranokalanao na ny blôginao (Manoro ity manaraka ity aho hanandrana voalohany sy lehibe indrindra - Ezinearticles. com, GoArticles. com, na Articlebase. fr).
Tier 2 Fifandraisana
Fanorenana ny media sosialy amin'ny fanombohana ny sehatra momba ny raharaham-barotra amin'ny sehatra maro be toy ny Facebook, Twitter, LinkedIn. (Torohevitra: azonao atao ny manandrana mampiasa FanPageRobot, fitaovana ampiasaina hanaparitahana ny rohy amin'ireo media sosialy malaza amin'ny fomba tsy miangatra.
Ny fandefasana bilaogy an-tserasera mba hahazoana valiny an-tserasera).
Fanehoan-kevitra momba ny bilaogy niche-relevant.
Mandray anjara amin'ny adihevitra mafana momba ny bilaogy, forum, ary vohikala mifandraika amin'ny sehatra ho an'ny fanontaniana & valiny. (Torohevitra: alohan'ny zavatra hafa dia manoro hevitra aho amin'ny fananganana backlinks amin'ny Quora sy ny LinkedIn valiny).
Ny famokarana horonantsary ao amin'ny YouTube ny tranonkala faharoa manerantany dia tsy tokony hohamaivanina mihitsy. Aza misalasala manokatra ny horonan-tsarimiao ary manatsara ny fivarotana an-tserasera amin'ny aterineto miaraka amin'ny fampiroboroboana ny marika, mifanaraka amin'ny fanangonana ireo rohy sarobidy amin'ny fotoana iray ihany. (Toro-hevitra: Afaka manana mpivady avy hatrany ianao hamorona rohy - mameno fotsiny ny fizarana lehibe ao amin'ny mombamomba anao ahafahana mamela backlinks amin'ny tranonkalanao na ny blôginao).